ချစ်ကြည်အေး: "ကျွန်မက....ညာတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့"
အရေးကြီးတာက ကျွန်မ အခု ပြောပြမဲ့ စကားတွေကို ကြားပြီးတဲ့အခါ ရှင်တို့ နှုတ်လုံမှ ဖြစ်မယ်...
ကျွန်မက ညာတတ်လို့ပါ။ ကျွန်မမှာ ရည်းစားပေါင်း တစ်ကျိပ်မက ရှိခဲ့ဖူးပါရဲ့။ သေချာတယ်။ သူတို့အားလုံး အညာခံခဲ့ကြရတယ်။ တစ်ကယ်ချစ်တာလို့ အားလုံးကို ပြောခဲ့တယ်။ သေချာပါတယ်။ သူတို့အားလုံး ယုံခဲ့ကြတယ်။ ခုလည်း ကျွန်မမှာ ပြောစရာရှိတယ်။ ဒါကိုတော့ ရှင်တို့ နှုတ်လုံမှ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မပြောပါဘူးလို့ ကျွန်မကို ကတိတစ်ခုတော့ပေး။
ဒါပေမဲ့ ရှင်တို့ သိထားဖို့က ကျွန်မက ညာတတ်တယ် ဆိုတာပဲ။
သူက မိဘတွေပေးစားလို့ ယူလိုက်ရတဲ့ ယောကျာ်း။ ကျွန်မထက် ၁၀နှစ် ကြီးတယ်။ ဘယ်လိုမှ မနေပါဘူး။ သမီးတို့ ချစ်ခြင်းကို မခွဲကြပါနဲ့ လို့လည်း မိဘတွေကို ကျွန်မ မပြောခဲ့ဘူး။ လက်ရှိရည်းစားကို အဆက်ဖြတ်ပြီး အမေပေးစားတဲ့ လူကို ကောက်ယူလိုက်တာပဲ။ ယူချိန်တန်လို့ ယူလိုက်တယ်ပဲ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။ တစ်ကယ်အေးဆေးပဲ။ ကျွန်မ ညာတတ်ပေမဲ့ ဒါကို ရှင်တို့ မယုံချင်လည်းနေ။
၀ဋ်လည်တယ်ဆိုတာကို ရှင်တို့ ယုံကြသလား။ ယုံယုံ မယုံယုံ၊ ကျွန်မကတော့ ပြန်ရနေပြီ။ ကျွန်မဘက် ပြန်လာနေပြီ။ ပြန်မယူချင်လို့ မရအောင် အားလုံး ရုန်းမရတဲ့နွံထဲ ကျွံခဲ့ပြီ။ စိတ်ရှုပ်နေရင် လုပ်နေကျအတိုင်း ကျွန်မ ပြုံးလိုက်တယ်။ ကျွန်မလုပ်ခဲ့သမျှတွေ ကျွန်မ ပြန်ယူရဲရမှာပေါ့ရှင်။ ဟုတ်ဖူးလား။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာဟာ ကြံတစ်ချောင်း စုပ်ရသလို အချိုကုန်တဲ့နောက်မှာ ကျန်နေတဲ့ ဖွာတာတာ ကြံဖတ်ကြီးပါပဲ။ အဲဒါ ကျွန်မ ပြောတာ။ အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်မဒဿနဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ မှန်နေတယ်လေ။ ကျွန်မက ဖွာတာတာ ကြံဖတ်ကြီး။ ချိုမှ မချိုတော့တာဘဲ။ အိမ်ထောင်သက် ၃နှစ်ပြည့်အပြီးမှာ သူ အပြင်မှာ အချိုတွေ ထပ်ရှာတော့တယ်။ တစ်ယောက်မဟုတ်၊ နှစ်ယောက်လည်း မဟုတ်။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်။
သူဟာ လူရိုးလူအေး၊ စီးပွားရှာတော်သူမို့ အမေက ပေးစားခဲ့တာ။ လူရိုးလူအေး၊ စီးပွားရှာတော်သူမို့လည်းပဲ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာလား၊ ကျွန်မကပဲ ပေးဆပ်ဖို့ ၀ဋ်ကြွေးပါလာတာလား။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လူရိုးလူအေးက လူပွေလူရှုပ်ဖြစ်၊ မိန်းမဆိုးက မိန်းမပီသ ပိပြားသူဖြစ်။ ငါ့သမီးလေး ကံနည်းရှာတယ်တဲ့ အမေက။ အဲဒီအတွက် ကံနည်းသူမ ကျွန်မက ငိုချင်းပဲ ချရတော့မလို။ တစ်ကယ်ပါ။ ကျွန်မက ညာတာကို ဘိန်းစွဲသလို စွဲနေတဲ့ မိန်းမ၊ သူက အချိုကို ကိုကင်းလို ဖြတ်မရတဲ့သူ။ ဇာတ်က ကောင်းနေပြီ။ ဒီနေရာမှာ ၀ဋ်ဆိုတဲ့ အရသာထဲ ဘာကဘယ်လောက်ဆိုတာကို ပါဝင်မှုအချိုးအစားနဲ့တကွ ရှင်တို့ကို ကျွန်မ ပြောပြဖို့ လိုသေးလို့လား။
သူက ၀က်တစ်ကောင်လို အစားကျူးတယ်။ ၀က်မြေမနင်းသားလေး တစ်ကောင်ကို ၀ီစကီတစ်လုံးနဲ့ တစ်နေ့လုံး ထိုင်စားလား စားရဲ့။ ဘဲကင်တစ်ခြမ်း၊ ကြေးအိုးတစ်ပွဲနဲ့ ၀ိုင်နီတစ်လုံး တစ်ယောက်ထဲ၊ တစ်ထိုင်ထဲ ကုန်အောင် စားမလား စားနိူင်ရဲ့။ လုပ်ပေါ့ စားပေါ့၊ ရှာသမျှ ငွေဝင်နေတာပဲ။ ကျွန်မ မျက်စေ့ရှေ့ သူ စားပိုးနင့်ရင်တောင် ကျွန်မ ၀ဋ်ကြွေးကျေချိန် တန်ပြီဆိုပြီး ထိုင်ကြည့်နေမိမှာ။ ကျွန်မ ညာတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကိုတော့ ရှင်တို့ ယုံလိုက်ကြဖို့ ကောင်းတယ်။
တစ်နေ့က သူ သောက်စားမူးရူးပြီး အန်ထားလိုက်တာ၊ ပေပွနေတာပဲ။ ကျွန်မလား သန့်ရှင်းပေးရမှာပေါ့။ မိန်းမ၀တ္တရားထဲ ယောကျာ်းအမူးသမား အန်ဖတ်ကျုံးရန်ဆိုတာ ဘယ်အရူးကထည့်သွားတယ် ကျွန်မ မသိနိူင်ဘူး။ ခဏတော့ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားလိုက်တယ်။
ကျွန်မ ကားမောင်းပြီး သူ့အမေကို သွားခေါ်ခဲ့တယ်။ သူ့အမေကို သူ့သားအခြေအနေ အရှိအတိုင်း လိုက်ဖ်ပြလိုက်တယ်။ uncut, uncensored ပဲ။ ကြည့်ပေတော့။ အမူးလွန်ပြီး ဘုရားစင်ရှေ့ ပက်လက်ကြီး လဲနေတာကို သေပြီမှတ်နေတဲ့ အဖွားကြီးက သူ့သားကို အနီးကပ် အနုလုံ ပဋိလုံ ရှု့စားအပြီးမှာ မျက်ရည်လည်ရွဲနဲ့။ အတ္တဘောကဖြင့် မသေနိူင်သေးဘူး။ ကျွန်မက ပြုံးပြုံးလေးပဲ သူ့သား ချေးထုတ်ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေလိုက်တယ်။ အဲဒီညက အဖွားကြီး အိမ်မပြန်ဘဲ ကျွန်မတို့ အိမ်မှာပဲ အိပ်တယ်။
မနက်လင်းတော့ သားအမိနှစ်ယောက် လည်ချင်းယှက်ပြီး အလွမ်းသယ်နေကြလေရဲ့။ ကျွန်မကိုလည်း သူ့သားအနွံအတာ ခံတော်မူရှာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ပြောပါရဲ့။ နေ့လည်စာ စားသောက်ပြီးတော့ သားဖြစ်သူ ခွေးမြီးကောက်ကို ကျည်တောက်စွတ်ပေးပြီး အဖွားကြီး ပြန်သွားတယ်။
ခုတစ်လောတော့ အရက် မသောက်တော့ပြန်ဘူး။ သူ အရက်ဖြတ်မှ ဖြစ်တော့မယ်လို့လည်း ပြောပြောနေ တာပဲ။
အဲဒီနေ့က ကျွန်မ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ။ သူကြိုက်တဲ့ စပရိုက်အချိုရည်တွေ ကျွန်မ ရေခဲသေတ္တာထဲ ၀ယ်ထည့်ပေးထားတဲ့ဟာကို ယူသောက်နေတယ်။ ၂ပုလင်းကုန်လို့ နောက် တစ်ပုလင်းတောင် စသောက်နေပြီ။ ရာသီဥတုက ပူတယ်။ ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျအောင်ပူနေတဲ့ရာသီ နဲ့ အေးစိမ့်နေတဲ့ စပရိုက်က သူ့အကြိုက် လိုက်ဖက်ညီလို့။
အ၀တ်အစားလဲပြီးလို့ ကျွန်မ ပြန်ထွက်လာတော့ ထမင်းစားစားပွဲပေါ်မှာ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ မင်းဂွတ်သီးအခွံတွေ။ အဲဒါက သရက်သီးနဲ့ တွဲစားဖို့ ကျွန်မ ၀ယ်ထားတာ (ကျွန်မ ညာမပြောဘူး တစ်ကယ်)။ မင်းဂွတ်သီးတွေကို သူ့လက်ဖ၀ါးနှစ်ဘက်ထဲ ဖျစ်ထည့်ခွဲရင်း တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး စားနေလိုက်တာ။ အရမ်းချိုတာပဲ စားကြည့်ပါ လားတဲ့။ နေပါစေလို့ ကျွန်မ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ စားပါစေ။ သူက အချိုကြိုက်သူကြီး မဟုတ်လား။
တော်တော်များများ စားအပြီးမှာ သူ ထိုင်နေရာက လဲကျသွားတယ်။
ဆရာဝန်က သေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းဆိုတဲ့ နေရာမှာ အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းလို့ ရေးဖြည့်လိုက်တယ်။
ရှင်တို့ ကျွန်မကို ခပ်မဲ့မဲ့ ပြုံးမကြည့်လိုက်ကြပါနဲ့။ ကျွန်မ အမှန်အတိုင်းပြောရင် ဘယ်သူမှ ယုံကြမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
ညာပြောပြန်ရင်လည်း ညာနေပြန်ပြီလို့ပဲ ပြောကြဦးမှာ....
ညီမလေး Wed Mar 07, 10:16:00 AM GMT+8
ဟုတ်ပ ... ညာရင်လည်း ညာတယ်လို့ ပြောကြအုန်းးမယ်း)))
ဆုမြတ်မိုး Wed Mar 07, 10:18:00 AM GMT+8
T T Sweet Wed Mar 07, 10:23:00 AM GMT+8
မညာပါဘူး... ကြိုက်ပါတယ်... အရေးအသားရော ဇာတ်လမ်းပါ။
မအားလို့ မရောက်ဖြစ်ပေမဲ့ အားတာနဲ့ လာအားပေးသွားပါတယ်။
မေဇင် Wed Mar 07, 10:31:00 AM GMT+8
စပရိုက် နဲ့ မင်းကွတ်သီး မတည့်ဘူးလားဟင်....
Vista Wed Mar 07, 10:34:00 AM GMT+8
မိုက် ခိုက် .
Crystal Wed Mar 07, 11:01:00 AM GMT+8
:P Wed Mar 07, 11:09:00 AM GMT+8
မချစ်.. ဘာနဲ့ ဘာက မတည့်တာလဲ
Cameron Wed Mar 07, 11:18:00 AM GMT+8
မင်းကွတ်သီးက သကြားနဲ့မတည့်ဘူးကြားဖူးတယ်....။ ဇာတ်လမ်းလေးမိုက်တယ် မကြီးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီလေးကြိုက်စ်.....။
Mrs. Bagel Wed Mar 07, 11:18:00 AM GMT+8
သိပြီ၊ မင်းဂွတ်သီးနဲ့ သကြား မတည့်တာ။ အရေးအသားကတော့ ရှယ်ပဲ အစ်မချစ်။ :)
tin min htet Wed Mar 07, 11:21:00 AM GMT+8
မညာနဲ့:)
1.5 လီတာ ပုလင်းကြီး ၂ လုံးနဲ့မင်းဂွတ်သီး တခြင်းbဆိုရင်တော့ မသိ။ နည်းနည်ပါးပါး ဆိုရင်တော့ မသေပပါ။။
ShwunMi- Wed Mar 07, 11:31:00 AM GMT+8
မင်းဂွတ်သီးက စပရိုက်နဲ့ဆို ဂွတ်တာ =)
Sean OK, Sai Wed Mar 07, 11:36:00 AM GMT+8
မိစံ Wed Mar 07, 12:17:00 PM GMT+8
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာဟာ ကြံတစ်ချောင်း စုပ်ရသလို အချိုကုန်တဲ့နောက်မှာ ကျန်နေတဲ့ ဖွာတာတာ ကြံဖတ်ကြီး...။
ကျွန်မက ဖွာတာတာ ကြံဖတ်ကြီး။ ချိုမှ မချိုတော့တာဘဲ...။
သူက ၀က်တစ်ကောင်လို အစားကျူးတယ်..။
San San Htun Wed Mar 07, 12:43:00 PM GMT+8
ပန်းချီလေးက တကယ်သရုပ်ပေါ်တယ် မမချစ်..
အင်ကြင်းသန့် Wed Mar 07, 12:43:00 PM GMT+8
ဟိုက်....ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ မင်းကွတ်သီးရှိမရှိ ရှာကြည့်ဦးမှပဲ....:P:P
sosegado Wed Mar 07, 01:26:00 PM GMT+8
ဖိုးတုတ် Wed Mar 07, 01:47:00 PM GMT+8
An Asian Tour Operator Wed Mar 07, 03:31:00 PM GMT+8
rose of sharon Wed Mar 07, 05:19:00 PM GMT+8
တီချမ်း Wed Mar 07, 09:06:00 PM GMT+8
ပုံ ၁ က ပိုတူတယ် ပိုကြိုက်တယ်
ပိုစ့်လေးက ဘတ်ရတာကောင်းတယ် လို့ ပြောရင် ရှင်တို့ ယုံလိုက်ပါ
Shinlay Wed Mar 07, 10:07:00 PM GMT+8
SHWE ZIN U Wed Mar 07, 11:11:00 PM GMT+8
မညာဘဲ ရေးသွားရရင် ညာတတ်တယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Thu Mar 08, 12:23:00 AM GMT+8
ကောင်းလွန်းလို့ ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်သွားတယ်
အစ်မက ရသအစုံရေးနိုင်တယ် တော်လိုက်တာ.
စကားမစပ် အစ်ကိုကြီးက ရေခဲသေတ္တာထဲက စပရိုက်သောက်ဖို့ လန့်နေဦးမယ်း)
PhyoPhyo Thu Mar 08, 12:40:00 AM GMT+8
မချစ်ကြည်ရေ မညာဘူး ကြိုက်တယ်။
PhyoPhyo Thu Mar 08, 12:41:00 AM GMT+8
ပြောဖို့ ကျန်သွားလို့ ပြန်လှည့်လာတာပါ။
ညီရဲသစ် Thu Mar 08, 01:43:00 AM GMT+8
အစ်ကို့ ကို ပြောရမယ် မင်းဂွတ်သီးတွေတွေ့ ရင် သတိထားဖို့ ကို...
သတိုး Thu Mar 08, 11:23:00 AM GMT+8
ညာလည်း ယုံလောက်အောင် ကောင်းနေတဲ့ဇာတ်ပါပဲ။ ဒါမျိုးလေးတွေ ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ် မချစ်ကြည်။
mstint Thu Mar 08, 02:55:00 PM GMT+8
like လုပ်ရုံလေးလုပ်သွားတယ်နော်း)
Z@! Thu Mar 08, 05:38:00 PM GMT+8
ပျိုးယုဝသုန် (Pyo Yu Wathone) Thu Mar 08, 09:21:00 PM GMT+8
ကျွန်မက ညာတတ်တယ် ..ဒါပေမယ့် ..သူသေသွားတာက တကယ်...
khin Fri Mar 09, 02:06:00 PM GMT+8
Sint Si Fri Mar 09, 04:42:00 PM GMT+8
အမ်တီအန် Fri Mar 09, 06:32:00 PM GMT+8
အဲ့ဒီနှစ်ခု မတည့်တာ မှတ်ထားဦးမှ..။ စားမိမှာစိုးလို့ပါ.. :)
အဲ့ဒီ ညာတတ်တာလေးကိုက ယုံချင်နေမိတာ......။
မောင်သီဟ Fri Mar 09, 11:58:00 PM GMT+8
ARTARLOOT Sun Mar 11, 04:01:00 PM GMT+8
m Sun Mar 11, 04:50:00 PM GMT+8
ngelay Sun Mar 18, 05:05:00 PM GMT+8
ကျွန်မက...ညာတတ်တယ်။ ဒီပို့စ်ကို လုံးဝ..မကြိုက်ဘူးးးးး။
မြေသန့်တောင် Tue Mar 27, 08:34:00 AM GMT+8
ညာတာမကောင်းဘူး မမရဲ့ ဒါပေမယ့် မမညာတာလေးဖတ်ရတာကောင်းတယ် ။ မင်းဂွတ်သီး ကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်လည်း သတိရှိသွားတာပေါ့ ။
မြတ်ပန်းနွယ် (Myat Pan Nwe) Thu Jun 21, 11:57:00 AM GMT+8
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာဟာ ကြံတစ်ချောင်း စုပ်ရသလို အချိုကုန်တဲ့နောက်မှာ ကျန်နေတဲ့ ဖွာတာတာ ကြံဖတ်ကြီးပါပဲ။
ဆိုတဲ့ စကားကို သဘောကျလိုက်တာ။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ သွေးအေးတဲ့၊ ခံစားချက်ကို ရှေ့တန်းမတင်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မြင်ယောင်သွားတယ် အစ်မရေ။
ရင်လှိုင်းခတ်သံ Thu May 02, 06:55:00 PM GMT+8
မကြီးချစ် ညာတတ်မှန်း မသိလိုက်ဘူး..။ အခုမှပဲ သိတော့တယ်..။